Shirkadda Diyaaradaha Qatar Airways oo duulimaadyo toos ah Muqdisho ka bilaabeysa – Bandhiga
Shirkadda Diyaaradaha Qatar Airways oo duulimaadyo toos ah Muqdisho ka bilaabeysa
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaaladaMuqdisho ayaa marti-galinaya duulimaadyo toos ah oo heer caalami ah tan iyowixii ka danbeeyay bur-burkii dowladda dhexe Soomaaliya.
Shirkadda Qatar Airways ayaa bilaabeysa duulimaad toos ah bisha Jun ee sanadka 2019ka waxaana uu duulimaadkan shirkadda Qatar Airways noqonayaa mid ka mid ah dulimaadyada heerka caalami ee uu marti-galinayo garoonka Aadan Cadde Airport.
Shirkadda Ethiopian Airline ayaa dhawaan bilaawday dulimaad rasmi ah oo u dhaxeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Addis Ababab , hasse ahaatee dowladda waxaa uu dib u dhac ku yimid duulimaad ay ballaanqaaday shirkadda Kenya Airways in ay ka bilaabeyso Muqdisho iyo Nairobi.
Shirkadda diyaaradaha Turkish Airline ayaa si joogta ah uga soo degta garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, waxaana ay ka mid tahay diyaaradihii ugu horeeyay ee heerka caalami ah si rasmi ah uga howlgala garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Dib u howlgalinta dulimaadka shirkadda diyaaradahaQatar Airways ayaa wax weyn ka taridoonta isku socdka labada magaalo ee Muqdisho iyo Doha iyo sare u qaadistaxiriirka ganacsi ee labada dhinac, iyadoo la og-yahay in dalka Qatar ay ku noolyihiin Jaaliyad ballaaran oo Soomaalyeed oo intooda badan halkaa u jooga howloganacsi.